24 mai 2018 · déliremadagascar
Archives journalières 24 mai 2018
Mitaraina mafy ny tantsaha mpamboly sy ireo mpivarotra anana eny amin’ny tsenan’ny Namontana. “Nanomboka tamin’ny nisian’ny hetsika tarihin’ireo solombavambahoaka ho an’ny fanovàna, eny amin’ny 13 mey , zara raha mahalafo gonin’anana izahay”, hoy ny mpivarotra anana irao ao Namontana. Continuer la lecture →
Ny 14, 15, 16 jona 2018 no hankalaza ny Alahamady na ny taom-baovao Malagasy ny fikambanan’ny Zanandranavalona. Andro alakamisy ny 14 jona 2018 ka ny 15 jona 2018 vao tena hanomboka ny fankalazana. Continuer la lecture →
Socio-eco	 24 mai 2018 R Nirina
Grande Braderie: Nanomana fanomezana ny mpandray anjara
Amin’izao ankatoky ny fetin’ny reny izao, efa niomana amin’ireo karazana fanomezana tsara omena ho an’ny reny ny mpandray anjara amin’ny “Grande Braderie de Madagascar”. Continuer la lecture →
FANISAM-BAHOAKA SY TOERAM-PONENANA: Ahafantarana ny filan’ny mponina
Iray dolara isaky ny olona ny teti-bola ampiasaina amin’ny fanisana ankapobeny ny mponina sy ny toeram-ponenana. 45.000 olona no nahazo fiofanana manokana hanao ny fanisana ny olona isan-tokantrano. Continuer la lecture →